Waa maxay Ethereum 2.0 maxayse muhiim u tahay - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Waa maxay Ethereum 2.0 maxayse muhiim u tahay
Tag: ethereum, Ethereum 2.0, Mashiinka Virtual Ethereum (EVM), Iskuxirka Websaydhka Ethereum (EWASM), Cadeynta Stake, miisaan u yeelasho, Vitalik Buterin
Markii ay ahayd 2015 Ethereum wuxuu galay shabaqa weyn, waxay kicisay xiisaha iyo xiisaha qayb weyn oo ka mid ah dunida horumartay, iyo dabcan sidoo kale maalgashadayaal. Waxay filayeen waxay ahayd inay yara jilciyaan maadaama miisaanka iyo arrimaha amniga ay bilaabeen inay ka muuqdaan borotokoolka. Horumarin ayaa lagu sameeyay koodhka, horumarkuna waligiis ma istaagin, laakiin si dhakhso ah ayey ugu caddaatay qof walba in Ethereum uu u baahan yahay dib-u-habeyn dhammaystiran si uu mustaqbalka ula tartamo. si loo dhameystiro mustaqbalka: sidaas Ethereum 2.0 wuxuu ku dhashay, oo leh "lambarkiisa" magaca Serenity.
Waad salaaman tihiin dhamaantiin qurux iyo fool xumo. Haddii ay tani tahay markii ugu horreysay ee aad halkan timaaddo, waa lagusoo dhoweynayaa.
Halkan, Cazoo, waxaan ku sharaxeynaa mashaariicda ugu xiisaha badan adduunka weyn ee loo yaqaan 'cryptocurrencies', falanqeyn qiimaha iyo astaamaha, helitaanka aasaasiga ganacsiga iyo sameynta falanqeyn farsamo oo horumarsan. Marka la soo koobo, waxaa jira wax loogu talagalay dhammaan dhadhanka.
Cazoo waa buug, xusuus-qor, Moleskine ah qoraalo ii oggolaanaya inaan xafido cilmi-baaristeyda. Waxaan ku sameeyay websaydhka, si guud, maxaa yeelay wixii aan bartay ayaan hadda ka bartay shabakadda, iyo shabakadda waxaan dib ugu soo celiyaa anigoo rajeynaya inaad adiguba isticmaali kartid. Hadday sidaas tahay, waan ku faraxsanahay taas.
Aynu tagno fiiri waxa Ethereum 2.0 yahay oo aan raadino dhammaan faahfaahinta xiisaha leh.
Miyaad horeyba u rabtay inaad iibsato Ethereum? Haddii aad tan ku sameyso Binance, isticmaal xiriirinta gudbintaan: waxaad leedahay qiimo dhimista ugu sareysa ee la heli karo, 20%, dhammaan guddiyada, weligiis!
Tilmaanta kooban ee Ethereum 2.0
Dhibaatooyinka Ethereum, oo Ethereum 2.0 ay rabto inay xalliso
Maxaa ku beddeli doona Ethereum 2.0?
Wejiga 0: Caddaynta saamiga iyo silsiladda Beacon
Wajiga 1aad: Kala Bixinta
Wejiga 2aad: Isku biiritaanka
Wajiga 3: EWASM
Saamaynta qiimaha ETH oo ay la socoto cusbooneysiinta Ethereum 2.0
Blackview Smartwatch, Ilaalada Jimicsiga Dumarka ee Ragga, 1,69 ″ Taabasho buuxda oo Smart ah oo leh Heerkulbeeg / Pulse Oximeter (SpO2) / Pedometer / Kormeerka Heerka Wadnaha / Ogeysiinta Fariinta, Kormeeraha Hurdada ee Ciyaaraha
TAP-TRAP® - KOOXDA DABINKA - DAREENKA DHABANKA EE DHABTA AH
Ethereum 2.0 Serenity, sida uu ku sharaxay Preston Van Loon, waa xannibaad ka duwan kan hadda jira ee Ethereum sidaan ku naqaano. Lafteeda lafteeda waa casriyayn Ethereum ah, taas oo waliba ah uma baahna fargeeto adag oo ah silsilad asal ah.
Preston Van Loon - Iskuduwaha sheybaarada Prysmatic, Ethereum Protocol Develope
Sidee ayaad awood ugu yeelan doontaa inaad gasho Ethereum 2.0? Debaaji ayaa la samayn doonaa hal mar oo ah Ether kii hore illaa silsiladda cusub iyada oo loo marayo Qandaraasyada Smart. Tani waxay noqon doontaa macaamil ganacsi hal-dhinac ah, ka dib isticmaalka nidaamka dhaxalka ee Ethereum waa inuu joogsadaa.
Sidii aan ku sheegay bilowgii, Ethereum waxay horeyba u soo martay cusbooneysiinno qaarkood oo u horseeday inay noqoto mid ciriiri badan oo la qiyaasi karo, si hufan loo filayo sii deynta Ethereum 2.0. Isbeddeladani waxay leeyihiin magacyo cajiiba: Homestead Maarso 2016, Metropolis Byzantium Oktoobar 2017, Metropolis Constantinople Febraayo 2019, iyo Istanbul Diseembar 2019.
Waan fahamsanahay sababta ka dambeysa isbeddelka: naqshadeynta hadda jirta waxay leedahay xaddidaadyo aad u tiro badan. Algorithm Caddeynta Shaqada iyo qaybaha kale ee dhismaha ayaan waligood awoodin inay la qabsadaan baahida horumarineed.
Qaar ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn waa:
Xajmiga: waa xaqiiqo la ogyahay in kumbuyuutarka adduunka (diiradda ugu weyn ee Buterin iyo abuurkiisa Ethereum) waa gaabis. Waqtigan xaadirka ah, borotokoolka waxaa hareeyay dhammaan codsiyada baahinta ah (DAPPS) iyo Qandaraasyada Casriga ah ee dhex maraya. Waxoogaa horumar ah ayaa laga sameeyay wejigan, laakiin waxaa cadaatay in Caddaynta Shaqada xannibaaddu aysan la qabsan karin dalabka.
ammaankaWaligeed ma dhicin wax xadgudub amni oo muhiim ah oo ka dhaca Ethereum, laakiin xoogaa horumar ah ayaa la ogyahay inay ka faa'iideysanayaan caafimaadka nidaamka oo dhan. Tani waa himilada Ethereum 2.0, oo ujeedadeedu tahay in la abuuro barxad aad u adag.
Mashiin farsameed cusub: mid ka mid ah hal-abuurnimada weyn ee Ethereum waxay ahayd sii deynta mashiin dalwaddo ah. Tani waa qaybta maamusha qandaraasyada caqliga badan wuxuuna maamuuska ka dhigayaa kombiyuutar adduunka oo dhan ka shaqeeya. Dhibaatadu waxay tahay in qaybtani sidoo kale aad u gaabis tahay. Tani waa dhibaato weyn maxaa yeelay macaamil kasta oo ka socda Ethereum wuxuu cusbooneysiiyaa heerka caalamiga ah ee shabakadda. Waqtigan xaadirka ah, EVM (Ethereum Virtual Machine) waa cidhiidhi ku jira nidaamka.
Marka dhibaatooyinka Ethereum 1.0 la sharaxay, waxaan eegi karnaa wixii horumar ah ee Ethereum 2.0 ay keeni doonto. Maskaxda ku hay in horumarintani ay ku jiraan marxalad aad u horumarsan oo qorshaynta, horumarka dhabta ah, in kasta oo qayb ahaan horeba loo bilaabay, haddana ma iman doono.
Cadeynta Stake: Habka algorithm ee la isku raacsan yahay ee loo yaqaan 'Proof-of-Stake algorithms' waa isbedelka ugu weyn ee la yimaada Ethereum 2.0. Farsamadan ayaa adeegsata saamiga halkii laga isticmaali lahaa korontada oo ah cabirka ansaxnimada.
Caddaynta Shaqada xannibaadda, silsiladda lehawood xashi sare ayaa ka sii fiican.
In Proof of Stake blockchain, silsiladda leh ilaha ugu badan ku jira waa kan ugu fiican.
Intaas waxaa sii dheer, ansaxiyayaashu waxay noqdaan isha cusub iyo sidoo kale xannibaadayaasha. Kuwani waa adeegsadayaal xidhay ugu yaraan 32 ETH. Xog uruurintaani waxay u oggolaaneysaa ansaxiyaha inuu galo bakhtiyaanasiib si loogu xusho inuu yahay abuuraha baloogga soo socda sidaas darteedna uu awoodo inuu sheegto abaalmarintiisa. Haddii ansaxiyaha uu qadka ka baxo ama uu si daacad darro ah u dhaqmo inta ay qayb firfircoon ka tahay shabakadda, qaar ama dhammaan Ether-ka loo adeegsan jiray inuu noqdo ansaxye ayaa laga qaadayaa.
XaraashkaIsbedelka kale ee weyn ee nidaamka ayaa ah adeegsiga silsiladaha dhinaca ee loo yaqaan shard. Horaan waxaan idhi gaabiska wax kala iibsiga, ciriiriga shabakada, waa mid kamid ah dhibaatooyinka waaweyn ee nidaamka jira. Qaab dhismeedkeeda jira waxay umuuqataa inaysan jirin xal rasmi ah. Sababtaas awgeed, abuurista silsilado yaryar oo kala duwan (shards) oo la macaamili kara ganacsiyada shaqsiyeed waa fikrad cajiib ah iyo horumar weyn. Polkadot ayaa tan sameysay tan iyo markii ay dhalatay.
Waa maxay Ethereum 2.0 RoadMap
Sida Ethereum 1.0, Ethereum 2.0 sidoo kale waxaa lagu bilaabi doonaa afar waji:
Wajiga 0: bilaabida nidaamka cusub ee caddeynta-saamiga (oo loo yaqaan Casper) iyo horumarinta xarunta dhexe ee Ethereum 2.0 (oo loo yaqaan 'Beacon Chain');
Wejiga 1: cabir awoodaha Ethereum 2.0 adoo u qaybinaya shabakada 64 blockchains (oo loo yaqaan silsilado shard) taas oo u oggolaan doonta shabakada inay ka shaqeyso macaamil badan;
Wajiga 2: Awood u yeelo awooda qandaraasyada caqliga leh ee u oggolaan doona dApps inay ku shaqeeyaan Ethereum 2.0, oo ay sameystaan ​​buundo udhaxeysa shabakada asalka ah ee Ethereum iyo Ethereum 2.0; iyo ugu dambeyn
Wajiga 3: Sida laga soo xigtay aasaasaha Ethereum Vitalik Buterin, wejigan wuxuu noqon doonaa "aasaas ahaan inaan sameeyo waxyaabo kale oo aan dooneyno inaan ku darno markii aan bilowno", laakiin dhab ahaantii waxay martigelin doontaa isbeddelka EVM (Ethereum Virtual Machine).
Weli waxaa loo qorsheeyay in la sii daayo 2020, Beacon Chain waa Caddaynta shabakadda saamiga loo qorsheeyay inay ka garab shaqeyso Ethereum 1.0. Waxaa la bilaabi doonaa oo keliya haddii 524.288 gudaha Ether la xareeyay, iyo ugu yaraan 16.384 node loo diiwaangeliyey inay yihiin ansaxyaal. Markii hore, Chain Beacon uma noqon doono isbeddel weyn dadka isticmaala badankood. Shabakadani ma martigelin doonto Dapps mana socon doonto qandaraasyo caqli badan. Shaqadeeda aasaasiga ah waxay noqon doontaa sida diiwaanka ansaxiyayaasha iyo qaybtooda dhexdeeda shabakadda.
Marxaladani waxaa loo qorsheeyay hal sano ka dib marka la dhammeeyo Wajiga 0. Marxaladdan, hal-abuurka 'Ethereum 1.0 Chain' ayaa loo goyn doonaa qaybo yaryar oo loo yaqaan 'shards'. Tirada la filayo shards waa 64 bilowga hore. Marxaladani waa mid aad u jilicsan: waxay u oggolaaneysaa inay si toos ah u kala macaamil u sameyso silsilado gaar ah oo ay oggolaato farsamaynta xogta isku midka ah.
Marxaladdan marki hore ee caddaynta shaqada waa in lagu daro shabakada cusub oo ah mid ka mid ah burburka, mid ka mid ah silsiladaha hoose. Sidaa awgeed, wejigan daqiiqad kasta looma baahnaan doono in rikoodh laga kala wareejiyo silsilad kale. Taariikhda macaamil ganacsi ee silsiladda 'PoW silsilad' ayaa ku noolaan doonta iyada oo qayb ka ah Ethereum 2.0. Tani waa inay dhacdaa waxyar uun ka dib dhammaystirka Wajiga 1.
Marxaladdan, waxyar kadib markii labada silsiladood ee Ethereum 1.0 iyo Ethereum 2.0 la mideeyay, mashiinka Virtual Ethereum ayaa la beddeli doonaa. Ma jiraan faahfaahin badan oo ku saabsan wajigan, laakiin mishiinka casriga ah ee cusub waxaa lagu magacaabi doonaa Ethereum WebAssembly (EWASM), maadaama ay ku salaysnaan lahayd qaabka websaydhka.
Cusboonaysiintaan, Dapp martigelinta iyo fulinta qandaraaska caqliga ayaa si buuxda ugu socon doona Ethereum 2.0. Tani waxay ka dhigan tahay inaan awood u yeelan doonno inaan xukumi karno cusbooneysiinta la dhammeeyey oo keliya marka Ethereum aysan dhameystirin wajigan.
Wadadu waa dheer tahay waana la wareegaa, laakiin awoodaha cusub ee Ethereum 2.0 ayaa ka dhigtay afka dad badan biyo. Adduunku wuu is beddeli doonaa. Tani waa cusbooneysiin weyn oo aan ka faa'iideysan doonin oo keliya dadka isticmaala Ethereum, laakiin sidoo kale mustaqbalka u horseedi doonta warshadaha guud ahaan.
Kuwo badan ayaa aaminsan in Ethereum ay awood u leedahay inay qabsato oo dhaafto Bitcoin. Sidoo kale ayaan u maleenayaa. Tani waxay la macno tahay kor u kac ku yimaada qiimaheeda 20 jeer ... habka:
Iibso EtherEUM ON BANANCE, iyadoo 20% laga dhimay on Komishanka
Waxaad rabtaa inaad sifiican wax u fahamto sida sicir-dhimista u shaqeyso?
Waxaad sidoo kale ka akhrisan kartaa halkan sida samee inta ugu badan dhimista Binance.
4.7 ka mid ah 5 xiddigood(34520)
129,99 (laga bilaabo 04/07/2022 00:11 GMT +00: 00 - Macluumaad kaleWaxayna ku xiran yihiin isbedel. Macluumaad kasta oo ku saabsan mowduucaan waxaa laga heli karaa Amazon.com, sida ku habboon wakhtiga iibsashada.)
4.3 ka mid ah 5 xiddigood(1203)
13,85 (laga bilaabo 03/07/2022 20:19 GMT +00: 00 - Macluumaad kaleWaxayna ku xiran yihiin isbedel. Macluumaad kasta oo ku saabsan mowduucaan waxaa laga heli karaa Amazon.com, sida ku habboon wakhtiga iibsashada.)
4.6 ka mid ah 5 xiddigood(518)
47,99 (laga bilaabo 03/07/2022 20:19 GMT +00: 00 - Macluumaad kaleWaxayna ku xiran yihiin isbedel. Macluumaad kasta oo ku saabsan mowduucaan waxaa laga heli karaa Amazon.com, sida ku habboon wakhtiga iibsashada.)
4.5 ka mid ah 5 xiddigood(367)
19,99 (laga bilaabo 03/07/2022 20:19 GMT +00: 00 - Macluumaad kaleWaxayna ku xiran yihiin isbedel. Macluumaad kasta oo ku saabsan mowduucaan waxaa laga heli karaa Amazon.com, sida ku habboon wakhtiga iibsashada.)
4.4 ka mid ah 5 xiddigood(5284)
376,75 (laga bilaabo 03/07/2022 20:19 GMT +00: 00 - Macluumaad kaleWaxayna ku xiran yihiin isbedel. Macluumaad kasta oo ku saabsan mowduucaan waxaa laga heli karaa Amazon.com, sida ku habboon wakhtiga iibsashada.)
4.1 ka mid ah 5 xiddigood(55)
22,09 (laga bilaabo 03/07/2022 20:19 GMT +00: 00 - Macluumaad kaleWaxayna ku xiran yihiin isbedel. Macluumaad kasta oo ku saabsan mowduucaan waxaa laga heli karaa Amazon.com, sida ku habboon wakhtiga iibsashada.)
Maqaalka horeWaa maxay Ethereum?